Sida loo soo ceshado xogta ka dib qaabaynta U disk - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Sida loo soo ceshado xogta ka dib qaabaynta U disk
Soo kabashada xogta diskka
Maqaalkaan, waxaan kaagala hadli doonaa habka 'disk disk data U' si aan kaaga caawiyo inaad hesho disk-ga U maxaa yeelay lama tirtiri karo, ma qaabayn karo, mana qeybin karo. , Virus iyo xog kale oo lumay. Maqaalka waa mid aad u dheer, waxaad riixi kartaa xiriirka hoose si aad si dhakhso ah u aragto qaybta xiisaha. Ku saabsan xogta disk luminta iyo soo kabashada
U disk data Recovery Tutorial mid ka mid ah: sida loo soo celiyo faylasha uu tirtiray U disk? Casharka Dib U Soo Celinta Macluumaadka 2: Sidee loo soo ceshadaa xogta kadib qaabaynta U disk? Casharka Dib U Soocelinta Xogta 3aad: U Disk Ma Furi Karo Balan Qaadka Qaabaynta, Sidee Loo Soo Noqdaa Xogta? Casharro wax ku ool ah
U Disk Data Recovery DataQQ /
Casharro dheeraad ah oo laxiriira
Waxyaabaha ku saabsan xogta U-disk luminta iyo soo kabashada
U-disks-ka waa ay fududahay in la qaado oo lagu keydiyo noocyo kala duwan oo macluumaad ah ha noqoto nolosha ama shaqada, U-disk waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo faylasha. Si kastaba ha noqotee, xogta lagu keydiyo diskka U ayaa sidoo kale lumin doonta sababao kala duwan awgood, sida tirtirka shilka caadiga ah, qaabeynta shilka, qaabeynta goorta qeybta aan la furi karin, iyo wixii la mid ah. Marka, sidee loo soo ceshan karaa xogta lumay kombiyuutarka U disk? Kumbuyuutarka Xiaobai kumbuyuutarka laftiisa dib ayuu u bogsan karaa? Soo kabashada xogta diskka 'disk disk data' waa habka dib loogu soo celiyo faylasha lumay U disk-ka sababo la xiriira tirtirka shilka, qaabka, fayraska, qaab aan deg deg loo sii dejin karin, iwm. Tusaale ahaan, soo kabashada sawirrada lumay, fiidyowyada, maqalka, Dukumiintiyada Word, elektiroonigga Excel. Xogta kaladuwan sida shaxda, dukumintiga PDF, baakadaha la isku haysto, iwm. Waqtiga xaadirka ah, habka ugu caansan ee loo adeegsado soo kabashada ayaa ah in la isticmaalo barnaamijyada kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'disk disk disk data' si ay kaligeed uga soo kabato. Maanta, tifaftiraha ayaa u isticmaalaya barnaamijyada soo kabashada xogta Bplandatarecovery tusaale ahaan inuu ku soo bandhigo sida loo soo celiyo faylasha lumay ee si shil ah loo tirtiray, loo qaabeeyay, oo aan looga furi karin diskka U. Xusuusin: Ka dib marka faylka U disk-ga uu lumo, jooji dhammaan hawlgallada aan muhiimka kuu ahayn si aad uga hortagto in macluumaadka lumay dib-loo-qoro. Aaladaha loo baahan yahay: U diskka oo leh xog lumay, kumbuyuutar socodsiinaya nidaamka Windows, U disk soo kabashada kombuyuutarka 1: Sida loo soo kabto diskiga diskka 1 Tirtirey faylal? Tallaabada 1: Kuxi USB drive wadista xogta lumay kombiyuutarka, oo kumbuyuutarka Bplandatarecovery ka fur kumbuyuutarka. Qalabka loo yaqaan 'Bplandatarecovery' looma baahna in la rakibo. Kadib markii aad soo degsato, kala bixi si aad u socodsiiso softiweerka. Xusuusin: Ha ku keydin barnaamijka softiweerka qeybta xogta lagu luminayo. Tallaabada 2: Raadi oo xulo qeybta U disk ee u baahan soo kabashada xogta barnaamijka Bplandatarecovery, ka dibna riix batoonka "Soocelinta faylka". Tilaabada 3: Hubi "Soocinta Tirtirka Files", ka dibna riix batoonka "Bilow". Haddii "Soo-celinta faylasha la soo celiyo" ikhtiyaarkaa aan la heli karin feylasha aad u baahan tahay, waxaa lagugula talinayaa inaad fiiriso labada ikhtiyaar ee kale oo mar labaad iskaan sawirka 'disk disk'. Tallaabada 4: Dib u eeg faylka oo eeg haddii faylka uu waxyeello gaadhay iyo in kale. Feylasha ku qoran natiijooyinka skaanka ayaa la hor mari karaa .. Qaabka dib u eegista ayaa ah: laba-guji faylka si aad u furto daaqadda preview-ka sida ku cad shaxanka hoose. Xaaladaha qaarkood, xitaa haddii magaca faylka iyo qaabka buugga ay sax yihiin, faylka u dhigma lama furi karo. Sidaa darteed, waa inaad saadaashaa in faylka si caadi ah looga soo kaban karo adoo gujinaya preview-ka. Tallaabada 5: Nuqul faylasha si aad u dhammaystirto soo kabashada. Muddo intee le'eg ka dib marka la tirtiro xogta diskka diskka ayaa dib loo soo kaban karaa? ? Si adag uga hadlidda, in xogtu si guul leh looga soo kaban karo kuma xirna waqtiga luminta xogta, illaa iyo inta macluumaadka lumay aan dib loo qorin, si kasta oo ay ahaataba inta xogtii lumay dib loogu soo kabanayo. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan, haddii xogtu sii dheeraato, ayay u badan tahay suurtagalnimada in wax la qoro, sidaa darteed, haddii xogtii lagu helo inuu lumay, waa in sida ugu dhakhsaha badan loogu soo kabaa. Maxaan sameeyaa haddii uusan jirin faylka asalka ah oo magac magac leh kadib iskaanka? Macluumaadka ku jira natiijooyinka skaanka ma laha magaca faylka asalka ah, taasoo muujineysa in qaab-dhismeedka asalka ah si ba'an loo dhaawacay. Xaaladdan oo kale, waxaad ku daawan kartaa feylasha noocee ah oo laga soo kabsaday oo aad ka heli kartaa xogta loo baahan yahay adoo fiirinaya feylka. 3. Maxaan sameeyaa haddii softiweerku uusan aqoonsanin disk-ga U marka uu soo noqonayo faylka U disk? Xaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa deked kale oo USB ah ama waxaad isku dayi kartaa kumbuyuutar kale Haddii aad weli catintid aqoonsiga U disk-ga, waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaha farsamada Bplandatarecovery si aad uga caawiso falanqaynta sababta iyo xallinta. Soo kabashada
Sidee dib loogu soo ceshan karaa xogta U disk lumay? Kuwani waa saddexda habab ee loo isticmaalo soo kabashada ee uu badanaa soo saaray tifaftiraha. Ilaa iyo inta macluumaadka lumay aan la qorin isla markaana U diskku uusan lahayn waxyeello jir ahaaneed oo daran, xogta lumay ayaa dib loogala soo bixi karaa iyadoo la raacayo habka qoraalkan. Ugu dambeyntiina, tifatiraha wuxuu ku xasuusinayaa in xogta muhiimka ah ay tahay in dib loo soo celiyo waqtiga!
PreSidee dib loogu soo celiyaa feylasha uu tirtiray diskiga U?
NextDhibaatooyinka caadiga ah iyo hababka soo kabashada ee xogta xoqga U disk ee ay waxyeeleeyaan fayras